Laakkofsi baqattoota Eertiraa koolugaltummaa Awrooppatti gaafatanii hedduu dabale - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Laakkofsi baqattoota Eertiraa koolugaltummaa Awrooppatti gaafatanii hedduu dabale
Akka ibsa Dhaabbanni Baqattoota Addunyaa (UNHCR) Jimaata darbe bayetti laakkofsi baqattoota biyya Eertiraa irraa koolugaltummaa Awrooppatti gaafatanii isa woggaa darbeen wolbira yoo qabamu dachaa sadihiin dabaleera. Bifuma wolfakkaatuun, laakkofsi baqattoota Eertiraa gara biyyoota olla Itoophiyaa fi Suudaanitti dheessanis hedduu olka’ee jira.
Akka dubbataan UNHCR kan ta’e Adriyaan Edwaardis, bara 2014 keessatti, beekaa barri kuni ammas hindhumanne, baqattoota Eertiraa naannawa 37,000 Aafrikaa irraa gara Awroppttaii kan ce’an. Bara dabre laakkofsi baqattoota Awrooppaatti harka kennaatanii 13,000 ture. Bara kanatti baqattoota Eertiraa 36,678 biyyoota Awrooppaa 38 keessatti harka laatan. Baqattoonni hedduun isaanii koolugaltumma kan gaafatan biyyoota Siwiidin (9,531), Jarmanii(9,362) fi Siwizerlaand (5,652) itti. Hedduun baqattoota kanniinii dooniidhaan galaana Meediteraniyaanii qaxxamuraniiti gara Awrooppaatti kan ce’en. Akkuma ibsa dubbataa UNHCR kanatti, koolugaltoota bara 2014 gara Xaaliyaaniitti dooniin dhufan keessaa 22% lammiiwwan Eertiraati. Sooriyatti aantee Eertiraan biyya sadarkaa 2ffaa irra jirtuudha, boqattoota heddu gara dachii Awrooppaatti erguudhaan.
Hedduun baqattoota Eertiraa gara Awrooppaatti ce’an Itoophiyaa fi Suudaan keessaan. Baatii Onkoloolessa bara 2014 qofatti baqattoota lammii Eertiraa 5000 tu daangaa ce’e gara Itoophiyaatti. Hedduun isaanii namoota umriin jidduu 18 – 24 jiraniidha. Woggaa kana baqattoota Eertiraa 10,700 Suudaanitti koolugaltummaa gaafate. Baqattoota Eertiraa naannawa 216,000 ta’utu Itoophiyaafi Suudaan keessa jiraatu. Itoophiyaa keessa baqattoota Eertiraa 106,859 jiraatu, akka ibsa UNHCR tti.
baqattoota gaanfa aafrikaa
Horn of Refugees
Previous articleBunni faaydaa fayyaa heddu qabaachuun isaa beekame
Next articleDaandiin Xayyaara Itoophiyaa Daandii Xayyaara Aafrikaa 2014 ta’uun muudame